Mayelana-Isikolo soLwimi oluPhakathi, iCambridge
Isikolo sethu sasekwa kwi-1996 liqela lamaKristu eCambridge. Saziwa ngokuba ngononophelo olukhulu ngaphakathi nangaphandle kwegumbi lokufundela. Uninzi lwabafundi bathi isikolo sifana nosapho.
Sikufutshane neevenkile zedolophu, iivenkile zokutyela, iimyuziyam, iikholeji zeDyunivesithi yaseCambridge kunye nesikhululo sebhasi. Simi kufutshane necawa entle yamatye.
Injongo yethu kukukwamkela ngezandla ezishushu kunye nethuba elihle lokufunda isiNgesi kwimeko enenkathalo, enobuntu. Iikhosi zethu ziqhubeka unyaka wonke kwaye ungaqala nayiphi na iveki. Sikwabonelela ngokulungiselela uviwo. Sifundisa kuphela abantu abadala (ukusuka ubuncinci kubudala be-18).
Abafundi abavela kumazwe angaphezu kwama-90 ahlukeneyo bafundile nathi kwaye kuhlala kukho ukuxubana okuhle kobuzwe kunye noqeqesho esikolweni. Bonke ootitshala bazizithethi zemveli kwaye iCELTA okanye iDELTA bafanelekile
Silawula isikolo ngokolawulo lukaRhulumente wase-UK kunye nesiNgesi sase-UK, sithatha onke amanyathelo afanelekileyo okuthintela ukusasazeka kweCovid-19.
Tisikolo sakhe yiCharity ebhalisiweyo (Reg No 1056074) nebhodi yeTrasti esebenza ngokwengcebiso. UMlawuli weZifundo kunye noMlawuli oPhezulu inoxanduva lokuqhutywa kwemihla ngemihla kwesikolo.
Ukuvunywa kweBhunga laseBritane
'IBhunga laseBritani lihlolisise kwaye livunyelwe iCambridge yoLwimi lwaseKhaya ngoAprili 2017. ISikimu sokuVavanya sihlola imigangatho yolawulo, izibonelelo kunye nezakhiwo, ukufundisa, inhlalakahle kunye nemibutho yokuvuma ehambelana nomgangatho jikelele kwindawo nganye ehlolwe (jonga www.britishcouncil.org/education/accreditation iinkcukacha).
Esi sikolo sobucala sisinikeza izifundo kwi-General English kubantu abadala (18 +).
Amandla aqaphele kwimimandla yokuqinisekisa umgangatho, ukuphathwa kwezemfundo, ukunakekelwa kwabafundi kunye namathuba okuzonwabisa.
Ingxelo yokuhlola yathi inhlangano idibana nemigangatho yeSkimu.
Uvavanyo olulandelayo ngo-2022
ICambridge idume kwihlabathi liphela ngeYunivesithi yayo, imbali, ubuhle, ukugqwesa kwizifundo kunye nobomi babafundi. Ndwendwela iikholeji kwaye...	Funda Okuninzi
Ukuzibophelela kwesikolo soLwimi oluPhakathi kukukunceda ulisebenzise ngokupheleleyo ixesha lakho eCambridge, uyonwabele...	Funda Okuninzi
Nantsi eminye yemisebenzi esihlala siyibandakanya, nangona okwangoku ixhomekeke kwizithintelo zeCovid-19, kwifayile ye-...	Funda Okuninzi